PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-12-30 - INJABULO AMASOSHA OMZABALAZO ENZELWE UKHISIMUSI
INJABULO AMASOSHA OMZABALAZO ENZELWE UKHISIMUSI
Ilanga langeSonto - 2018-12-30 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE [email protected] co.za
BEKUSINDWE ngobethole emoses Mabhida Stadium, ethekwini, umasipala wetheku enzele amasosha omzabalazo ezinhlangano ezahlukene ukhisimusi osezingeni eliphezulu ngolwesihlanu.
Bekuhlanganiswe amasosha omkhonto wesizwe ayeyibambe ngezikhathi zobandlululo engaphansi kwe-anc, awe-azanian People’s Liberation Army (APLA), eyabe ingaphansi kwepan Africanist Congress (PAC), naweAzanian National Liberation Army (AZANLA) YE-AZAPO.
Abebekhulumela amasosha omkhonto wesizwe, nawe-azanla, banxuse izigayigayi zempi ukuba zithokozele ukhisimusi wazo, ezinye izinkinga ezibhekene nazo zizobuye zibonwe.
Babonge imeya yetheku, unkk Zandile Gumede, engakwazanga ukuphumelela ngenxa yokuxinwa wumsebenzi, ngokubahlelela lo Khisimusi obuhambisana nezipho zama- voucher egilosa.
Amashosha abehlangene lapha bekungathi abuye izolo ehlathini, ekhuza zonke iziqubulo zomzabalazo, eviliyela ecula, esevukwe wusinga lwempi.
Ngisho ogogo namaxhegu abesukuma aqhugele khona ephakamisa imilenze.
Icelwa ukuba iphawule imeya ithe: “Ngiyaxolisa kakhulu ukungaphumeleli ngenxa yokuxinwa wumsebenzi, kodwa ngeke sakhohlwa yigalelo lamasosha ethu ayibamba kunzima.
"Sikhululeke kanjena nje, yibo laba bafowethu, ngakho siwumkhandlu sathatha isinqumo sokuba njalo ngalezi zikhathi zikakhisimusi, sibajabulise.
"Ngiyathanda ukusho ukuthi sesinehhovisi lawo amasosha emkhandlwini wethu kanti ngonyaka ozayo asenxuse ukuba kube nezinhlelo zokuba kuqiniswe ezokuphepha ezikoleni nokuthi kulotshwe umlando ngemvelaphi yomzabalazo wezikhali ukuze intsha yakithi yazi ukuthi inkululeko ayizanga ngepuleti.”
Mayelana nezinkinga zamasosha, imeya ithe amasosha ayayazi imigudu elandelwayo uma enezikhalo.
Nokho ILANGA Langesonto lipotshozelwe ngamasosha angathandanga ukuba adalulwe ukuthi abhekene nezinkinga zokunganakekelwa selokhu abuya ehlathini. Elinye lesifazane lithe: “Ngikhuluma nje anginayo indawo yokuhlala nezingane zami, ngisho umsebenzi angiwutholi ngoba ngachitha sonke isikhathi sami ngisekudingisweni.”
ABE-APLA nabo bakhala esifanayo bathi bacindezelekile.
BESE kuyisikhathi sokuthola okuya ngasethunjini emasosheni omzabalazo emcimbini wawo kakhisimusi, obusemoses Mabhida Stadium, ethekwini.
UNKZ Queen Sibiya waselamontville ethekwini ophakathi, uke wazikhuza kwanyakaza wonke amasosha emabhida Stadium ngolwesihlanu.